I-Prevision ye-Metal Sheve Precision, ukuKhwela kwinqanaba lokuKhangela ngokuKhanya, uMatshini weStrang Straightener ovela kuMvelisi waseTshayina.
Inkcazo:Ukujonga ishidi leNtshisakalo yeMeta,Ukujonga ngokuthe tye,Umatshini we-Metal Straightener Machine,Iphepha le-Metal Leveler,Ukujonga ishiti Metal Leveler,Ukujonga ngokuthe tye
Home > Imveliso > I-Metal Sheet Straightener > Ukujonga ishidi leNtshisakalo yeMeta
Iintlobo zeMveliso ze- Ukujonga ishidi leNtshisakalo yeMeta , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ukujonga ishidi leNtshisakalo yeMeta , Ukujonga ngokuthe tye ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umatshini wokujonga amanqanaba aphezulu  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokujonga ngokuthe tye  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokujonga amanqanaba aphezulu
Umatshini wokujonga amanqanaba aphezulu Ngaba luhlobo olunye lwensimbi ethe ngqo emarikeni njengokubekwa emgangathweni kwesinyithi. Umatshini wokujonga amanqanaba aphakamileyo wenziwe ngokukodwa ukulungiselela izinto zetsimbi zombane, izixhobo...
Umatshini wokujonga ngokuthe tye
Umatshini wokujonga ngokuthe tye ukuphakama luhlobo olunye lweshiti yensimbi ethe ngqo kwimakethi njengokuchaneka komgangatho wensimbi. Amanqaku kunye nenzuzo yomatshini ochanekileyo wokujonga ngokuthe tye Ifanelekile kubunzulu bezinto: 0.1-0.6mm....
KwiChina Ukujonga ishidi leNtshisakalo yeMeta Abaxhasi
Oomatshini besixhobo sephepha lesinyithi isetyenziselwa ukubeka umgangatho ngokungalingani kwephepha lesinyithi, kwaye isiphumo esongeziweyo somngxunya okanye isiqwenga somhlaba siphunyezwa ngokujikeleza okungaphezulu nangaphantsi, ukuze kufezekiswe iziphumo ezigudileyo. Ikwabizwa ngokuba ngumthengisi. Umthengisi jikelele uhlala phezulu nakwi-10 iziqwengana. Kwaye ngaphambi nasemva kwe-roller yokudlulisa. Inxalenye ephezulu inesiphatho sohlengahlengiso lokuchaneka kobungqingqwa ngokuchanekileyo.
Ukujonga ishidi leNtshisakalo yeMeta Ukujonga ngokuthe tye Umatshini we-Metal Straightener Machine Iphepha le-Metal Leveler Ukujonga ishiti Metal Leveler Ukwenza iishiti zeshiti